The Nest Beyond that Window - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by प्रवीण October 26, 2019
| भेटिएको कथा, TODAY |
कहिलेकाहीँ लाग्छ मलाई कतै त पुग्नु छ । मलाई कतै हुनु छ, बस्, यहाँ होइन । यो ठाउँ मेरो होइन । म यहाँको होइन । त्यसो भए म कहाँको हो त ? यस्ता बकवास कुराहरूको कारखाना हो मेरो मस्तिष्क ! यस्ता वाइयात सोचहरूको एउटा जीर्ण संग्राहलय हो, मेरो मन !
आज को कहाँ छ ? हिजो कहाँ थियो ? भोलि कहाँ हुन्छ ? यी कुराहरू थाहा हुनु हो भने, संसार बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो कि झन् गाह्रो ? संसार पुरा रूपले बुझ्न के के गर्नु पर्छ ? कस्तो हुनुपर्छ ? जोगी बन्नुपर्छ ? या घाटतिर यसै बरालिँदा पनि दिमागमा झट्ट झुल्किन्छ यो संसारको सार, जादु जसरी ! या कतै त्यो अन्जान मृत्युसँग त छैन, यो ब्रह्माण्डको रहस्य ?
भविष्य के हो ? मैले सोचिरहेको भविष्य कतै भुत त हैन ? अनि हिजोको त्यो कालो अतित कतै भविष्य कै अर्को नाम त होइन ? म के वर्तमान मै बाँचिरहेको छु र ? यो आज, ‘वर्तमान’ नै हो भनेर कसले पुष्टि गरेको छ ? के ले नाप्न सकिन्छ ? या नापिएको छ ?
“नापिस्……!”, आफ्नै मन भित्रको कर्कश आवाजले मेरो कल्पनालोकमा पुगेको मन/मस्तिष्क फेरि पनि मेरो कोठाको झ्याल बाहिर पुग्छ । झ्याल बाहिरको बकैनाको रुखमा । जसको एउटा हाँगाको कापमा ढुकुरले गुँड बनाएको छ । गुँडमा दुईवटा अण्डा छन्, एउटा अण्डालाई बकैनाको सानो हाँगाले आधा छोपेको छ । अर्को भने पुरा रुपले देखिरहेछु म । एकछिन अगाडि माउ ढुकुर/ढुकुर्नी पनि त्यहीँ थिई । त्यो ढुकुर्नीको आँखा छेउमा सानो कालो तिल जस्तो छ, सायद चराहरूको पनि कोठी हुन्छ होला ! अहिले त त्यो ढुकुर्नी पनि गुँडमा छैन । सायद, चारो खोज्न गई कि ?
कोठाको सानो स्पिकरमा बब मार्ली, गाँजाले लठ्ठ भई, उसकै कपाल जस्तै लठ्ठा परेको गीत गाइरहेछ । कोहिकोहि बेला मेरा ओठहरूले पनि उसको गीतलाई नक्कल गरिरहेछन्, “…नो वमेन …. नो क्राइ….वमेन लिटल डार्लिङ….डन्ट सेड नो टियर्स…. ”
कोठाको ऐनाभित्रबाट एउटा कालो आकृति मलाई नै घुरिरहेछ भन्ने भान मलाई अघिदेखि भइरहेको छ । तर मैले वास्ता गरेको छैन । मैले ऐना तर्फ फर्केर पनि हेरेको छैन । मैले टेबल छेउको कुर्सिलाई तानेर, खाट छेउमा ल्याएको छु । आफ्नो ढाडलाई कुर्सिको ढाडमा र खुट्टालाई खाटमा अड्याएको छु । र एकोहोरो त्यो बकैनाको हाँगामा भएको गुँडलाई हेरिरहेछु । सिरानी छेउमा ‘शैलेन्द्र अधिकारी’को ‘निर्वेद’ले मलाई एकोहोरो घुरिरहेको महशुस पनि गरिरहेछु ।
‘त्यो ढुकुर्नी कहाँ गई होला ?’, अब दिमागले नदुखेको टाउको दुखाउन थाल्यो । ‘कतै यी अण्डालाई छोडेर अर्कै भाले ढुकुरसँग प्रीत लगाउन त थालिन ऊ ? या कुनै गुलेलीको निशानामा परी ? या आफ्नै गुँड बिर्सी कि ? आफ्नै घर कसरी पो बिर्सन सक्छ कोही ? के ढुकुरहरूलाई पनि निशा लाग्दो हो ? आकाशको कुनै भूलभुलैयामा त हराइन ऊ ? या यी अण्डाहरू बेकामे छन् ? यहीँ थाहा पाएर ऊ अर्कै प्रेमीसँग अर्को गुँड बनाउन त थालिन ?’, कोठाको भित्ताभरि बब डिलन गुन्जिरहेका छन्, “…..माइ मोदर वाज अ टेलर…सि सो दिज न्यू ब्लु जिन्स….”
| छुटिएको कथा, A WEEK AGO |
हप्ता दिनअघि कुर्सीमा बसेर, मार्क म्यानसनको ‘द सब्टल आर्ट अफ नट गिभिङ अ फक’ मा घोत्लिरहेको थिएँ । संसारको बेस्ट सेलिङ किताब, एउटा आशाको सुन्दर पुस्तक, म चाहिँ निराशाका साथ पढिरहेको थिएँ । अल्छि मानी-मानी पानाहरू पल्टाइरहेको थिएँ । मलाई यो नन-फिक्सनले कहिलेदेखि तान्ने हो, यसको कुनै अत्तोपत्तो थिएन । तर म पढिरहेथेँ, कोर्सका किताब पढेझैँ गरि । कोठाको स्पिकरमा, ‘बिथोबिन’को ‘आर्चडुक ट्रियो’ एकानासले बजिरहेको थियो । बिथोबिनलाई मैले मुराकामीका किताबहरूमा भेटाएको हुँ, पछि युटुभमा सुनेँ, त्यसपछि त मलाई त्यो पियानोको धुनले मोहनी लगाइदियो ।
झ्यालबाट आएको ढुकुरको कुर..कुर आवाजले मेरो किताबमा भड्किरहेको ध्यानलाई झ्याल बाहिर पुर्याइदियो । एक जोडी ढुकुर बकैनाको रूखमा गुँड बनाउने तयारी गरिरहेका थिए । एउटा ढुकुर एकछिन फुर्र… उडेर कतै जान्थ्यो र फर्केर आउँदा उसको चुच्चोमा परालको सानो त्यान्द्रो हुन्थ्यो । त्यो त्यान्द्रो ल्याएर उसले, अर्को ढुकुरको चुच्चोमा राखिदिन्थ्यो । यो दृश्यले मलाई छुट्याउन गाह्रो परेन कि कुन भाले ढुकुर र कुन पोथी !
दुई दिन लगाएर दुई ढुकुरले मेरो झ्याल अगाडिको बकैनाको रूखमा सानो गुँड बनाए । आफ्नो घर तयार पारे । त्यसपछि मेरा दिनहरू केही समय किताबका पानाहरूमा, केही ल्यापटपका फिल्महरूमा र बाँकी समय त्यहीँ झ्यालबाहिरको गुँडलाई हेर्दै बित्न थाले । तेस्रो दिन त्यो गुँडमा नयाँ पाहुना आएको थियो । एउटा सानो अण्डा त्यो गुँडमा थियो । बिहानीको घामको न्यानोपनले मुस्कुराए जस्तो देखिन्थ्‍यो । त्यसदिन मैले महशुस गरेँ, अण्डाहरूमा पनि ज्यान हुन्छ ।
दिनभर दुबै ढुकुर त्यो गुँडमा हुँदैन थिए । बिहान, बेलुका मात्र म तिनीहरूलाई देख्ने गर्थेँ । राती सुत्ने बेलामा पनि ती दुई ढुकुरको कुर…कुर मेरो कानमा परिरहन्थ्यो । मलाई मधुर लाग्थ्यो । मजा लाग्थ्यो । एउटा धुन लाग्थ्यो । संगीत लाग्थ्यो । चौथो दिन अर्को अण्डा पनि गुँडमा देखियो । ढुकुरहरू सदाझैँ गुँडमा थिएनन् । ‘यी अण्डाहरू कहिले बचेरा/बच्चा बन्छन् होला ? कहिले उड्ने हुन्छन् होला ?’, म सोच्न थाल्थेँ ।
अर्को दिन पनि मेरो, किताबहरूका पानामा र झ्याल बाहिर आँखा दौडाउँदै बित्यो । बिहान झल्यास्स दुबै ढुकुर, ढुकुर्नीलाई देखेको थिएँ । त्यसपछि दिनभर तिनीहरू देखा परेनन् । गुँडमा बस्, एक जोडी अण्डा थिए । ‘मैले यिनीहरूको चिरबिर कहिले सुन्न पाउने होला’, यस्तै सोच्दै बसिरहेँ । बेलुका, गुँडतिर यसो आँखा लगाएँ । ढुकुर्नी अण्डालाई छोपेर बसिरहेकी थिई । यताउति हेरेँ, ढुकुर कतै देखिनँ । ‘ ढुकुर, ढुकुर्नी त प्रेमका प्रतीक हुन्, यिनीहरु त कहिले नछुटिनु पर्ने ?, म आफ्नै सोचको भुमरीमा घुम्न थालेँ । ‘ आखिर कहाँ गयो त्यो ढुकुर ? कसैको ढुङ्गाको निशानामा त परेन ऊ ? या कुनै अर्कै प्रेमिका भेटायो उसले ?’, मैले झट्ट उसलाई सम्झेँ ।
ऊ अर्थात् प्रस्तभ । मेरो पुर्वप्रेमी जसले एक महिना अघि मात्र मलाई फोन गरेर भनेको थियो, “ अब म हाम्रो सम्बन्धलाई यहाँभन्दा अघि बढाउन सक्दिनँ..” । बिना कुनै कारण, उसले हाम्रो ४ वर्षे लामो प्रेमलाई सजिलैसँग तोडिदिएको थियो । उसले फोन राखेपछि, मैले फेरि उसलाई फोन गरेको थिएँ । तर उसको मोबाइल स्वीच्ड अफ आयो । मलाई सिर्फ कारण जान्नु थियो, उसलाई रोक्नु थिएन । त्यसपछि न मैले उसलाई फोन गरेँ, न उसले मलाई नै गर्यो । उसलाई सम्झिँदा म सधैँ उसले मेरो लागि भनेर लेखेको एउटा छोटो कविता सम्झिन्छु, जसको कुनै शिर्षक थिएनः
“ यस्तो होस् / भइदियोस्
यो ब्रम्हाण्डको महान् शक्ति मेरो अघि आइदियोस्
मलाई चरा बनाइदियोस्
– मलाई तिम्रो दिलसम्म उडेर पुग्नु छ !”
| बिलाएको कथा, TODAY |
बेलुकासम्म पनि ढुकुर्नी आफ्नो गुँड फर्किन । अबेरसम्म पनि ऊ आई कि भनेर घरि घरि म झ्याल बाहिर हेरिरहेछु । तर मोबाइलको लाइटमा गुँडका अण्डा सिवाय केही देख्दिनँ । मलाई निद्रा लागेन । ‘आखिर कहाँ गई होला ऊ ? के भयो होला उसलाई ? मेरो जिन्दगीमा जस्तै, यो बकैनाको रूखमा पनि एकएक गर्दै कोही आए र फेरि एकएक गर्दै बिलाए । कोही किन आउँछ जिन्दगीमा क्षणभरको लागि ? राम्रै चलिरहेको जिन्दगीलाई भताभुङ्ग पारेर किन बिलाउँछ कोही ? कहाँ जान्छ खै ?’ स्पिकरमा उही भावुकतामा, छायाँ गाँगुली बजिरहेकी थिइन्, “ आपकी याद आती रही…रातभर….”
राती ढिलो सुतेकाले बिहान अबेर उठेछु । आँखा खोल्ने साथै, ढुकुर्नी गुँडमा फर्किई कि भनेर झ्याल बाहिर हेरेँ । तर यो के..अरे..खै त यहाँको बकैनाको रुख ? मेरो सातो गयो । झ्यालबाट तल हेरेँ, रूख त कसैले काटिसकेको रहेछ । ठुटो मात्र देखेँ । म हतार हतार तल झरेँ । ममी भान्सामा खाना पकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ । ढोकामा पुग्ने बित्तिकै हतारिएको स्वरमा सोधेँ, “….ममी त्यहाँको…..रूख कसले काट्यो ?”
ममीले सब्जी चलाउँदै, मतिर हेर्दै नहेरि भन्नुभयो, “के भन्छे ? कहाँ को रूख ?”
“ त्यो के….मेरो कोठाको झ्याल छेउको ?”, मेरा लामा लामा श्वासमा शब्द मिसिए ।
ममी बल्ल मतिर फर्किनु भयो । एउटा अनौठो नजर फ्याँक्दै भन्नुभयो । “ त्यो त तेरो बाबाले अस्तिकै दशैँमा काटेको हैन ?”
म आश्चर्यको अर्को दलदलमा फसेँ । केही नसोचि म त्यो बकैनाको रूख भएतिर दौडिएँ । अरे, त्यहाँ त एउटा मकिएको ठुटो सिवाय केही छैन । अब भने मेरो टाउको रन्थनियो । चक्कर लाग्ला जस्तो भयो । दिमागमा एकै चोटि ४/५ वटा कसैले फिल्म चलाइदियो । छिटो छिटो । जिउ सबै लल्याकलुलुक भयो । यहीँ ढल्छु जस्तो…. भान्सा कोठाबाट ममीको आधा चिन्ता र आधा माया मिसिएको स्वर मेरो कानमा ठोकियो, “…कान्छी, तैँले फेरि औषधी खान छोडिस् ?”
| Schizophrenia |
– isatype of mental illness known asa“psychosis.” Psychosis isamental illness in whichaperson cannot tell what is real from what is imagined. At times, people with psychotic illnesses lose touch with reality. The world may seem likeajumble of confusing thoughts, images, and sounds. Symptoms during psychotic phases includes: Seeing, hearing, feeling or smelling things that are not real (called hallucinations).
Image Source: A Kind of Magic by LOUI JOVER